iPhone 5 Li-ion Battery Chaiyo Chaiyo Yakazochinja
Tsanangudzo:iPhone 5 Battery,iPhone 5 Kushandiswa Kwepakutanga,iPhone 5 Battery Replacement,,,
Home > Products > iPhone Battery > iPhone 5 Battery
iPhone 5 bhetri repamende yepakutanga shandura bhatiri itsva  Bata Ikozvino
Brandnew iPhone 5 Replacement Lithium-ion Battery  Bata Ikozvino
Brandnew iPhone 5 Yakachinja Bhabheri Yacho  Bata Ikozvino
iPhone 5 Battery Replacement Original Change New Battery Kubatsira iOS update For iPhone 5 1440mAh 4.3V 5.4whr Ichi ndicho chinhu chokutanga chaunofanira kuziva pamusoro pehupenyu hwebheteri yeAlex nguva inenge mazana mashanu maitiro mukati . A...
Brandnew iPhone 5 Inotsiva Lithium-ion Battery ne Factory Price For iPhone 5 1440mAh 4.3V 5.4whr Ko iPhone yako 5 Lithium-ion Battery inokurumidza kukurumidza here? iPhone Inokwanisika Lithium-ion Battery inyanzvi yekombiyuta, uye mhando...
Brandnew iPhone 5 Yakachinja Bhabheri Yacho For iPhone 5 1440mAh 4.23V 5.4whr Ndekupi kwandinofanira kutenga bheteri ye-iphone 5 inotsiviwa? Wakambofunga nezvemubvunzo uyu here? Luckly, uri kuuya nekushanyira webhusaiti yedu ikozvino. Isu factory...
China iPhone 5 Battery Vatengi
Pakutanga iPhone 5 Battery Pack yakagadzirwa kubva ku brandnew cell, FPC uye bhokisi rekudzivirira, 0 bhati bhatiro pack inowanzopfuura makore 500 mararamiro ehupenyu, simba sepakutanga ± 50mAh. iPhone 5 Battery Kudzorerwa ne 100% pure lithium cobalt oxide yakasiyana neyezvinhu zvema ternary, mushure memaitiro 500 zvichiri kuchengetedza 80% simba asi ternary ine 30%. Takapa iPhone 5 Repair Battery quality yakanyanyisa uye yakachengeteka. Isu tiri nyanzvi yekugadzira pa iPhone Battery chete!
Unyanzvi: 1440mAh (5.45whr)
Usayizi wesero: 36x32x92mm
iPhone 5 Battery iPhone 5 Kushandiswa Kwepakutanga iPhone 5 Battery Replacement